Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Avy any ambony no natomboka ny fandraisana anjara | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Avy any ambony no natomboka ny fandraisana anjara
Niteraka resabe ny famerana ny vola efaina ho an’izay nandika fepetra mendrika fampidirana ny fiarany any amin’ny fanagadraina fiara atao hoe «foriera». Maneno ny fanononana an’ilay sazy, mangana ihany izany voatery andoa eo amin’ny folo tapitrisa iraimbilanja izany mba ahafahana ny fanagejana ny fiaran’ny tena, tsongoy fon’ny tena tsongoy fon’olona… Anefa voatery hitsetra an’izay tratra amin’ny fandoavana onitra nohon’ny fahadisona noefainy, tsy misy vozonana na terena andika lalàna sy fepetra, andraikitr’izay tratra no manefa sazy. Raha vao maheno voalohany ny fanenon’ilay sazy tsy maintsy mandalo ihany ny fanontaniana, sao dia mba diso avo loatra ny fetra nametrahana ny sedran’ny eloka. Misy fandaharana ara-tsokajiny moa ny adisona avy amin’ny fandikana fepetra eo amin’ny fifamoivoizana, efa eloka mavesatra matoa mendrika fampidirana foriera ary mifanandrify amin’izay ny sazy voalaza ao anatin’ny fitsipika. Misy ambaratongany ny adisona, tonga amin’ny fitenenana hoe arakara-tarehy voa-javatra, izay nanota be mandoa be. Tsy maintsy nihenjana moa ny fifehezana fa efa tafahoatra ny toe-tsaina entina andinganan-dalàna, ary raha ohatra noferana teo amin’ny roa alina ariary ny tampon’ny sazy dia tsy ho nandaitra tamin’ny mpanana, toy ny tsimpindy kely tsy mampiraika azy.
Mbola ho avy koa ny famerana ny sazy fanamelohana ny fahadisona maivamaivana, ary manaraka an’izany rehetra izany tsy maintsy entitra ny fomba ahafahana manery an’izay rehetra tratra andoa ny sazy takina aminy.
Tsy vitan’ny fanefana ny sazy fanafaizana ny fahadisona eo amin’ny fifamoivoizana ihany angamba ny fepetra ampiasaina ho fanerena ny fandoavam-bola adidy amin’ny fampizorana ny fitantanana eo amin’ny fiaraha-monina. Tsy misy trosa ny momban’io. Mba ahafahana ampanjakan’ny rariny antok’izany hoe tany tan-dalàna izay adidin’ny fanjakana no tsy mamela maina an’izay mihenahena ka zony ny mampiasa hery araky ny fahefana mifanandrify amin’izay voafetran’ny lalàna. Eo no mahatonga any amin’ny fitenenana teri-vozona. Misy anefa ireo tsy manan-katao anefana ny adidy tandrifiny, akory atao tany mena ve hirehatra ?
Raha heno ny fanondrotana ny sandan’ny asa rehefa misy Himo, ka tsy fiantrana intsony fa efa karazana karama ny takalo na vidin’ny asa dia tazana manangasanga any ny fanefana asa toy ny fandraisana anjara amina Himo ahafahana andraisa-karama izay anaovana tolo-botsotra andoavana na adidy na trosa amin’ny fitantanana.